Iinkomfa-Thematic Ibhodi Germany - IVIDIYO INCOKO - Uthando-intanethi!
Iinkomfa-Thematic Ibhodi Germany
Intlanganiso kunye isijamani ulwimi lokuqala usapho
Ndinguye ubudalaNdinguye hardworking, zolile kwaye sanele. Ukubhala, ukwazi.
Ndiza divorced kwaye ndifuna ukuqala esitsha ebomini
Familiarization kunye isijamani ulwimi kuba personal unxibelelwano, imizamo ka-isijamani imicimbi yayo nenkcubeko. Igama lam ngu-Anna, ndinguye amabini anesixhenxe kwaye kwagqirha. Ndinguye cheerful, esebenzayo, mna umdaniso a umdaniso.
Ndibhala e-ukubhala phezu kwayo, siphendule wonke umntu.
Ndinguye isijamani, ndimdala, ndiphila kwi-Italy kwaye bafundise isijamani. Ndifuna ukwazi isijamani, ndithetha isijamani kwaye isijamani, kuba friendship ezinzima budlelwane nabanye. Kwixesha elizayo, mna ube ujonge ukusa ku-Germany njengoko umntu isijamani nationality.
Umnxeba kum, bhala, mna ekhangele phambili ndibona wena.
Ndijonge kuba Germans kuba personal unxibelelwano. Kunye injongo yokwenza kuluntu Krasnodar territory. I-enxulumene umhlala-phantsi iqela ufunzele kuba abantu bamncedise ukufunda isijamani. Sisebenzisa studying ngokunxulumene iincwadi zezifundo"Isebenziseke ikhosi ye-isijamani ulwimi". Singathatha isiqingatha kanye ngeveki: a: domestic kwi nge prestige, d. Siyathemba ukuba omnye umntu uza kuba anomdla. Sisebenzisa ukulinda. Intlanganiso kunye isijamani-ukuthetha Germans. Mna isicwangciso ukuqala usapho kwaye yiya ku-Germany. Mna kuba unyana lowo ufumana ishumi elinesixhenxe leminyaka ubudala kwaye ubomi kunye unina.
Ndinguye divorced, ndinguye phezu, ndine isijamani iingcambu.
Ndingathanda ukwazi isijamani kuba psychological inkxaso. Ndiza amashumi amane anesihlanu. Uyakwazi ukubhala malunga kum, ndiyaqonda yenu yonke intlungu.
Ndiza kakhulu lonely.
Ndifuna ukuya kuhlangana umntu ukusuka kwi-Germany ukuqala usapho. Malunga nam: Svetlana (kunye isijamani iingcambu), ndiphila kwi-mnyama yolwandle coast kwi-Crimea, ukuqeqesha a ukutya technologist, i-omdala intombi, siphila ngokwahlukeneyo. Ndinguye passionately anomdla kwi-isijamani ulwimi, inkcubeko kunye imicimbi yayo. Ndifuna phambili intlanganiso kuwe.
Idilesi ye-imeyile yam.
Intlanganiso kunye Germans. Mna isicwangciso ukuqala usapho kwaye yiya ku-Germany.
Ndinesibini elinesixhenxe-yeminyaka ubudala abantwana.
Ndine blue-eyed brunette, amashumi amathathu anesithathu ubudala, zintandathu - intshi mde, amathandathu kilos. Sifuna nomdla usapho kwaye, ngaphezu kwazo zonke, a sithande ubawo kwaye umyeni.
Dating Kwi-Embindini, Free
Chatroulette ubudala free Dating budlelwane i-intanethi ividiyo incoko Chatroulette ngaphandle ubhaliso i-intanethi incoko ngaphandle ividiyo Dating ngaphandle ubhaliso free ubhaliso ividiyo incoko amagumbi ividiyo incoko dating ividiyo incoko girls roulette esisicwangciso-mibuzo Dating jikelele ehlabathini ividiyo